Maalinta: Meey 27, 2018
Adeegga Maareynta Maddaarka ee DHMI ee XMUMX Fee Adeeg
Markii ugu horreysay ee qandaraaska cusub ee garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul oo ay shaacisay shirkadda Kokpit.aero, khidmada adeegga rakaabka ee 20 € waxaa lagu dhawaaqay Maamulka Hawada ee Gobollada. Waxaa laga muujiyay tikidhada rakaabka caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha Atatürk [More ...]
Laga soo bilaabo Tüfenkci Tüfenkci ilaa Malatya Raybüs Injiilka
Customs iyo Ganacsiga Wasiirka Bülent TÜFENKÇİ, Railway ururka shaqaalaha Malatya Branch hadal uu barnaamij afur u abaabulay arrimaha gaadiidka ee Turkey ah in loo xaqiijiyo guusha xukuumadda AKP ah, dalka gaadiidka, badan ee birta iyo badda [More ...]
Manisa MOS Logistics waxay yareyneysaa Kaarbooyinka Qaadista 75 ee Gaadiidka Tareenka
Waxaa mahad leh Xarunta Saadka ee Manisa oo Aasaasay Aaga Warshadaha, badeecada warshadleyda waxaa loo dhoofiyaa aduun qiimo jaban. waxyaabaha Aliaga by tareenka oo ka tirsan xarunta Saadka iyo Port ee Izmir loo soo diray si toos ah Jamhuuriyadda Turkiga [More ...]
Muwaadiniinta buuxda ee ka soo jeeda Burcad-badeedka
Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa muddadii Duqa Caalin Alinur Aktaş qorshaysay iyo cufnaanta taraafikada waqti gaaban yareynta xaddiga isgoyska 40 caqlilaha ah ee codsiyada fidinta haadka, ayaa dhibco buuxa ka heshay Bursa. 6 dhibic elektiroonig ah [More ...]
4 / B'liler iyo Hawlgabayaal ayaa loo keenay Fitre
Abdullah Peker, Gudoomiyaha UDEM HAK-SEN (Shaqaalaha Turkiga ee Shaqaalaha Gaadiidka iyo Shaqaalaha Tareenka), wuxuu sameeyay qoraal qoraal ah isagoo leh: [More ...]
Joojisay Raadinta Roobka Roobka ee Kocaeli
Laga bilaabo saacadaha habeenkii ee Kocaeli, ku dhawaad ​​curyaaminta roobka ayaa sababay curyaannimo inuu joojiyo taraamka. Howlihii taraamka ayaa caadi ku soo noqday duhurkii. Roob culus ayaa curyaamiyey xalay [More ...]
Maanta taariikhda: 27 Awoodda Qareenka 1939
Maanta ee Taariikhda 27 May 1939 Sharciga ku saabsan Awoodda Qareenka (Badda, Birta, Diyaaradda) waxay dhaqan gashay. 3611 May 12 Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka iyo Dekadaha [More ...]